UNWTO Dunhu Musangano weAmerica: Technologies mukushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » UNWTO Dunhu Musangano weAmerica: Technologies mukushanya
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Honduras Breaking News • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
World Tourism Organisation (UNWTO), pamwe ne Ministry of Tourism yeEl Salvador neHonduran Institute of Tourism yeHonduras, vakabatana pamwe chete Musangano wechi 61 weKomisheni yeSangano reAmerica. Musangano uyu, uyo wakaitirwa muSan Salvador neRoatán muna Chivabvu 30 na31 zvichiteerana, wakaguma nemusangano wepasi rese wehunyanzvi hutsva hwakaiswa mukushanya. .
Iyo UNWTO Americaas Summit (CAM) yakaitirwa kekutanga munzvimbo mbiri - mumuzinda weSalvador uye muRoatán, Honduras - uye yakapindwa nenhume makumi maviri kubva ku20 Nhengo dzeMatunhu. Nhengo dzeSangano dzakabatana uye vanobatsirana navo vakaita seAmadeus IT Group vaivepowo paMusangano.
Munharaunda yakasiyaniswa zvakajeka nenhaka yayo, kupemberera kweGore reInternational reSustainable Tourism Yekuvandudza 2017 rinotungamira nhaurirano. Ruzhinji rweNhengo dzeNyika dzakacherekedza kukosha kwekusimudzira mumatunhu echikamu senzvimbo yakakosha kupfuura mushandirapamwe wepasi rose weGore reInternational.
Nyika dzakadai seColombia neNicaragua dzakaratidza kufarira kuwedzera hukuru hwemagariro, hunhu uye hunhu hunofungwa nepfungwa yekusimudzira kuitira kuti riwedzere kukosha mune zvekushanya. Kune iro chikamu, Costa Rica, piyona Nhengo Nyika mukuzvipira kune inoenderera kushanya, yakaratidza kukosha kwekushanda pakuchengetedza kubva kuhurongwa hwedzidzo uye mumhuri, ichisimbisa kukosha kwekubatanidza midhiya.
Hukama pakati pekusimudzira uye matekinoroji matsva ndiyo yaive dingindira guru reMusangano Wepasi Pose wakaitwa mushure memusangano wedunhu. Vanosvika zana nemakumi maviri vevatori vechikamu, vese vekunze uye vemunharaunda, vakagadzirisa maitiro azvino mudanho iri, kunyanya zvine chekuita neBig Data uye mapuratifomu matsva evashandi vevashanyi.
Kukosha kweInternational Network of Sustainable Tourism Observatories, imwe yematanho makuru eUNWTO pakuongorora zvinoitika mudunhu iri, yaive imwe yemapoinzi akaunza zvibvumirano mumusangano wedunhu.
"Tiri mudunhu rinopa maitiro mazhinji akanaka ane chekuita nekushanya kwakasimba uko kunogona kubatsira mune dzimwe nzvimbo dzepasi," akadaro Secretary General weUNWTO Taleb Rifai. Secretary General weSangano, uyo akasangana neMutungamiriri weEl Salvador, José Sánchez Cerén, akagamuchira panguva yekushanya kwake kushongedzwa kwemununuri wevaranda José Simeón Cañas, iyo Great Gold Plate Cross. Zvakare Hurumende yeHonduras yakashongedzawo Secretary General weWTO, Taleb Rifai, nehurongwa hwaFrancisco Morazán pachiyero cheGreat Officer.
Musangano weCAM 62 uchaitirwa muChengdu, China, musi wa12 Gunyana 2017 mukati mehurongwa hweUNWTO General Assembly.